Translate sewentig from Afrikaans to Burmese - MyMemory
Results for sewentig translation from Afrikaans to Burmese
die kinders van Sefátja, drie honderd twee en sewentig;
ထိုသင်္ဘော၌ပါသော သူများတို့သည် အရေ အတွက်အားဖြင့် နှစ်ရာခုနစ်ကျိပ်ခြောက်ယောက် ရှိသတည်း။
Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewe en sewentig maal.
ပါရုတ်အမျိုးသား နှစ်ထောင်တရာခုနစ်ဆယ် နှစ်ယောက်၊
ပါရုတ်အမျိုးသားနှစ်ထောင်တရာ ခုနစ်ဆယ် နှစ်ယောက်၊
En sy leër met hulle geteldes was vier en sewentig duisend ses honderd.
သူအုပ်ရသော အလုံးအရင်းအရေအတွက်ကား၊ ခုနစ်သောင်းလေးထောင်ခြောက်ရာ ရှိသတည်း။
ထာဝရဘုရားခံရသောအခွန်ကား၊ သိုးခြောက် ရာခုနစ်ဆယ်ငါးကောင်တည်း။
Toe Kenan sewentig jaar oud was, het hy die vader van Mahalálel geword.
ကာဣနန်သည် အသက်ခုနစ်ဆယ်ရှိသော်၊ သားမဟာလေလကို မြင်လေ၏။
အသက်နှစ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း ခုနစ်သောင်း၊ လေးထောင်ခြောက်ရာ ရှိကြ၏။
ဤသူတို့သည် ယုဒအဆွေအမျိုးဖြစ်၍၊ စာရင်း ဝင်သော လူပေါင်းကား၊ ခုနစ်သောင်းခြောက်ထောင် ငါးရာ ရှိသတည်း။
ထမ်းရွက်သောသူခုနစ်သောင်း၊ တောင်ရိုးပေါ် မှာ သစ်ခုတ်သောသူရှစ်သောင်းတို့ကိုလည်း စေခိုင်းတော် မူ၍၊
So was dan al die dae van Lameg sewe honderd sewe en sewentig jaar, en hy het gesterwe.
လာမက်သည် အသက်နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ရာ ခုနစ်ဆယ် ခုနစ်နှစ် စေ့သော်သေလေ၏။
ဗိဂဝဲအမျိုးသားဥသဲ၊ ဇဗ္ဗုဒ်နှင့် ယောက်ျား ပေါင်းခုနစ်ကျိပ်တည်း။
တေရသည် အသက်ခုနစ်ဆယ်ရှိသော်၊ သားအာဗြံ၊ နာခေါ်၊ ခါရန်တို့ကိုမြင်လေ၏။
Toe het Josef gestuur en sy vader Jakob laat roep en sy hele familie, vyf en sewentig siele.
ထိုအခါ ယောသပ်သည်စေလွှတ်၍ မိမိအဘ ယာကုပ်နှင့်တကွ အရေအတွက်အားဖြင့် ခုနစ်ကျိပ် ငါးယောက်သော မိမိအမျိုးသားချင်း အပေါင်းတို့ကို ခေါ်ပင့်လေ၏။
နွားသုံးသောင်းခြောက်ထောင်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားခံရသော အခွန်ကား၊ နွားခုနစ်ဆယ် ခုနစ်ကောင်တည်း။
Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en sewentig van die oudstes van Israel.
ထိုအခါ မောရှေ၊ အာရုန်၊ နာဒပ်၊ အဘိဟု အစရှိသော ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူ ခုနစ်ကျိပ်တို့ သည် တက်၍၊
အကြိမ်ခုနှစ်ဆယ် ခုနှစ်လီမြောက်အောင် လွှတ်ရမည် ငါဆို၏။
main aapko dekhna chahta hoo (Hindi>English)he should have empathy (English>Swahili)our father in heaven (English>Russian)schweitzerdreef (English>French)po ng marami sa (Tagalog>English)merci de nous avoir mis en contact (French>English)ex za kizung (English>Swahili)portarono (Italian>Thai)il est vingt deux heures dix (French>English)figura 36 (Italian>English)il est trois heures vingt cinq (French>English)matulog nako (Tagalog>Cebuano)daya kuda (Indonesian>French)kya nag (Tagalog>English)thinnava (Telugu>Kannada)check yourself (English>Italian)te amo mi princesa hermosa (Spanish>French)araw araw (Tagalog>Cebuano)rencana (Malay>Chinese (Simplified))• moral rationalism (English>Tagalog)desensitization (English>Tagalog)pubes (English>Korean)arresto del flusso sanguigno (Italian>English)les agrégats (French>Arabic)naan call pannalama (Tamil>English)